Stayhome ကာလမှာ ဆွဲထားတဲ့ပန်းချီလေးတွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့မျှဝေလာတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် - The Moon MM
Stayhome ကာလမှာ ဆွဲထားတဲ့ပန်းချီလေးတွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့မျှဝေလာတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ ဆယ်စုနှစ်တွေများစွာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူမို့ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုတွေ ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအားကျနေရသူဆိုလဲ မမှားပါဘူးနော်။
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ လတ်တလောမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid-19ကူးစက်ရေဂါပိုးတွေကြောင့် အလုပ်တွေရပ်နားထားပြီး အိမ်မှာပဲမိသားစုကို အချိန်ပေးနေသလို ဝါသနာပါရာလေးတွေလုပ်ရင်း stay homeကာလကို ဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က Stayhome ကာလမှာ ဆွဲထားတဲ့ပန်းချီလေးတွေကိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့“ Stayhome ကာလမှာ ဝါသနာပါရာလေးလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ မတ်မတ်အွဲ😁ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေ တွေ့ရင် , ရှုခင်းလေးတွေ တွေ့ရင် ရိုက်ပြီးသိမ်းသိမ်းထားတတ်တယ်, ပြီးရင် ပန်းချီပြန်ရေးဖို့အတွက်.. ခု ရေးထားတဲ့ ပန်းချီလေး တစ်ချို့ကို ပိတ်သတ်တွက် အမှတ်တရတင်ပေးလိုက်တယ်နော်…အွဲ ရဲ့ လက်ရာကိုတော့ မရီနဲ့နော်, ကြိုးစားဆဲသူမို့….😬မယ်သုပုံလေး ပုံတူရေးကြည့်တာ, မယ်သုကတော့ အားပေးတယ် အမေကို,မတူဘူးချည်းပဲ ပြောတာ…. ”ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ တကယ့်ကို ဘက်စုံတော်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါပဲနော်..။
Source-Eaiindra Kyaw Zin
Stayhome ကာလမွာ ဆြဲထားတဲ့ပန္းခ်ီေလးေတြကို အမွတ္တရအေနနဲ႔မွ်ေဝလာတဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒိတ္ဒိတ္က်ဲအႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြမ်ားစြာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိထားတဲ့ မင္းသမီးတစ္လက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ က်ရာဇာတ္႐ုပ္တိုင္းကို ပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမို႔ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုေတြ ဆြတ္ခူးရရွိထားတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သလို ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြအားက်ေနရသူဆိုလဲ မမွားပါဘူးေနာ္။
အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကေတာ့ လတ္တေလာမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ Covid-19ကူးစက္ေရဂါပိုးေတြေျကာင့္ အလုပ္ေတြရပ္နားထားျပီး အိမ္မွာပဲမိသားစုကို အခ်ိန္ေပးေနသလို ၀ါသနာပါရာေလးေတြလုပ္ရင္း stay homeကာလကို ျဖတ္သန္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန့မွာေတာ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္က Stayhome ကာလမွာ ဆြဲထားတဲ့ပန္းခ်ီေလးေတြကိုဗီဒီယိုေလးလုပ္ျပီး ပရိသတ္ေတြအတြက္ မ်ွေ၀လာခဲ့ပါတယ္။
သူမကေတာ့“ Stayhome ကာလမွာ ဝါသနာပါရာေလးလုပ္ျဖစ္ေနတဲ့ မတ္မတ္အြဲ😁ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ ပုံေလးေတြ ေတြ႕ရင္ , ရႈခင္းေလးေတြ ေတြ႕ရင္ ႐ိုက္ၿပီးသိမ္းသိမ္းထားတတ္တယ္, ၿပီးရင္ ပန္းခ်ီျပန္ေရးဖို႔အတြက္.. ခု ေရးထားတဲ့ ပန္းခ်ီေလး တစ္ခ်ိဳ႕ကို ပိတ္သတ္တြက္ အမွတ္တရတင္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္…အြဲ ရဲ႕ လက္ရာကိုေတာ့ မရီနဲ႔ေနာ္, ႀကိဳးစားဆဲသူမို႔….😬မယ္သုပုံေလး ပုံတူေရးၾကည့္တာ, မယ္သုကေတာ့ အားေပးတယ္ အေမကို,မတူဘူးခ်ည္းပဲ ေျပာတာ…. ”ဆိုျပီးေရးသားထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ျကီးေရ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကေတာ့ တကယ့္ကို ဘက္စံုေတာ္တဲ့အနုပညာရွင္တစ္ဦးပါပဲေနာ္..။
Covid19 ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေးမှ ရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေလာတဲ့ နေခြည်ဦး